Umngcipheko oyingozi wokuPhepha iwebhu yeNtlalontle | Martech Zone
Umngcipheko oyingozi wokuPhepha iwebhu yeNtlalo
NgoLwesihlanu, Novemba 26, 2010 NgoMgqibelo, Septemba 26, 2015 Douglas Karr
Bendicinga ngokuthiya le post, Kutheni uJonathan Salem Baskin engalunganga… Kodwa ndiyavumelana naye kumanqaku amaninzi kwisithuba sakhe, Umngcipheko oyingozi kwiWebhu yeNtlalo. Ndiyavuma, umzekelo, ukuba amajelo eendaba ezentlalo ahlala ezama ukutyhala amashishini ukuba asebenzise imithombo yeendaba ngaphandle kokuqonda ngokupheleleyo inkcubeko okanye izixhobo kwinkampani abasebenza nayo. Akufanele kumangaliswe, nangona kunjalo. Bazama ukuthengisa imveliso ... ukubonisana kwabo!
Andivumelani UMnu Baskin kumanqaku ambalwa, nangona:
Amagama umgibe oyingozi kuveza umfanekiso othile owoyikekayo wewebhu ekutshabalalisa inkampani. Inyani yile, ngaphandle kokuba usebenzela iqumrhu phantsi kweemeko ezinzima zomthetho, ukuthetha nokumamela abathengi bakho akuyothusi njengoko kuvakala. Ngapha koko, kulindeleke kakhulu kwaye kuyabulelwa. Ukuba ukhuphiswano lwakho luyafumaneka kuthungelwano ongekhoyo kulo ... iziphumo unako yonakalisa. Iinkampani ezinezixhobo kunye neenkqubo ezikhoyo zokulawula igama labo kwi-intanethi kwaye baphathe unxibelelwano bafumene iwebhu yentlalontle esebenzayo kwaye isebenza kakuhle kuyo yonke into ukusuka kwimiba yenkonzo yabathengi ukuya kwigunya lokwakha kushishino lwabo.
The iwebhu yentlalo itshintshe yonke into… Ngaphezulu kwabathengisi abanqwenela ukuvuma. Ukuchaza ukuba ayizukulingana nokutsho ukuba imibutho yabasebenzi ayinampembelelo kuhlaziyo lweshishini. Emva kwayo yonke loo nto, imigca yemveliso, iimveliso, ulawulo kunye nomsebenzi wawusekhona, akunjalo? Kulungile… kodwa imibutho yabasebenzi ixhase abasebenzi ukuze babe nefuthe kulawulo nasekuhlawuleni. Imibutho yabasebenzi inokwenza okanye iphule inkampani… kwaye banayo. Oku kulingana newebhu yoluntu. Iinkampani sele zixubusha ukhuphiswano lwazo ngokwamkela iinkqubo zentlalo; abanye bashiyeka ngasemva. Ukuchaza ngenye indlela kukungakhathali.
UMnu Baskin Ithi:
Abantu bahlala benencoko malunga neempawu. Ngaphambi kwe-intanethi, bekukho indawo yejografi, ubungcali, imfundo, inkolo kunye namaqela ezentlalo ekunokwenzeka ukuba abanzi kakhulu kwaye aqaqambile kunalawo afumaneka kwi-Intanethi, kodwa endaweni yoko aba nzulu kwaye axhasa. Imisebenzi yabo ngokuqinisekileyo yayiyeyezandla kwaye iziphumo zabo zazichaza indlela yokuphila. Ukuziphatha kwezentlalo akuhlukile kubuchwephesha; Kukuba nje sinokubonakala okungacacanga kwizinto ezithile zendlela abantu abancokola ngayo ngoku, ke sifuna ukukhuthaza okanye ukuthatha inxaxheba kwezo zinto sizenzayo.
Ewe kuyinyani… kodwa emxholweni kukuba ezi ngxoxo ngoku ziyinxalenye yazo irekhodi loluntu. Zingabhalwa, zilungelelaniswe kwaye zifumaneke kwiinjini yokukhangela kwimizuzwana nje. Kwaye abantu bahlawula ngakumbi nangakumbi kumagqabantshintshi kunye nokuphononongwa okuqokelelwa yinkampani. Umgca ophosiweyo ekusingatheni umba wabathengi kule mihla unokuba nefuthe elibonakalayo kwigama lenkampani apho lingazange lenze khona ngaphambili.
Abathengisi abavumelekanga ukuba bazimele ngasemva kwelogo, isilogeni, kunye nejingle entle kwakhona… abathengisi banyanzelwa ukuba banxibelelane ngqo nabantu. Sasidla ngokuthetha… ngoku kufuneka simamele kwaye siphendule. Akukho mpendulo kule ndawo yentlalo ifana nokungakhathaleli abathengi bakho. Abathengisi abakhange bayilungiselele ngokufanelekileyo le nto… kwaye bayangxama ukufunda ulawulo lwezichaso, uthungelwano, kunye nezinye izakhono ngaphaya kwemfundo yabo kunye namava.
Impembelelo kumashishini iyinyani. Iinkampani ziyangxama ukufumana izixhobo zokugubungela iinzame ezifunekayo zokubeka iliso kunye nokuphendula kwiwebhu yoluntu. Lo ngomnye umbandela ophoswe ngawo kwimithombo yeendaba zentlalo. Bathatha kancinci izixhobo ezifunekayo zokupapasha ngokwaneleyo, baphendule ngokukhawuleza ngokwaneleyo, kwaye baphuhlise iinkqubo ezifunekayo zokunyusa ngokupheleleyo iwebhu yentlalo.
Ke, ngelixa ndivuma ifayile ye- gurus Yenza umsebenzi ombi kunye nabaphathi ekubalungiseleleni iwebhu yentlalo, ndiyakholelwa ukuba ukuthintelwa kwewebhu yezentlalo kuyingozi kakhulu.
tags: UJonathan salem basketinishishini kwimidiya yoluntuimidiya yokuncokola uxokaiwebhu yentlalo
Iziphumo zoPhononongo lweShishini elincinci likaFacebook
Iingcebiso ezi-5 zokuKhulisa ishishini lakho ngeSelfowuni